တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဖျားတဲ့ည ...
နိုင်ငံဂျားမှာ ဖျားရင် တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်လုံးလီးဖြစ်ရတာ..
ပြောရင်းနဲ့ ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် စိတ်တိုရသည်..ဟိ။
မလေးလည်း ခုတစ်လော ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်၊ ဟိုညက သံပုရာသီး တစ်လုံးကို ကျောခုံးအောက်ဖိအိပ်၊ တစ်ညလုံး ကိုက်ခဲနေမကောင်း အိပ်က မရတာနဲ့ ထထိုင်ပြီး
မမေက ဖျားရင် ချစ်စရာ ကဗျာထွက်သေးတယ်..
မလေးနေမကောင်းရင် ငါးကြင်းဆီနှင့်ကြော်သော မင်္ဂလာဖိတ်စာမျိုးတွေ ထွက်တော့ တာပါပဲ..
ခဏခဏဖျားတာ... ခည်းမ လိုနေလို့..အမ။
1/27/2011 12:04 AM
Whatacoincident, MaMayDarWii, that my first comment to your blog unfortunately found you under the weather literally! No more snow yet it has been still cold , damp and windy; perfect conditions for cold and flu. And going out without headwear and proper wrapping up isarecipe for disaster! Drink lots of fluid (water), take paracetamol (2 tablets 500mg every4hours) and rest in bed is most doctors’ instruction. I would add to listen to your selected sayadaws’ ‘paritta'(11 suttas) chanting while having some Yoedayar spicy noodle soup also helps. Wishing you for the fast recovery.
As for your poem, well, what can I say? You are one ofavery few prolific writers on blogs and always deliver the quality stuff. Thanks.
1/27/2011 12:16 AM
I'm here with you, You are not alone, Though you're far away. :))
Please look after yourself. Get well soon.
with BIG Hugs!!!
1/27/2011 12:43 AM
ညီမမေ....ဖျားနေတယ်...လား၊ ဂရုစိုက်ပါ။ ဆေးခန်းသွားသင့်ရင် သွား၊ အစာ ပျော့ပျော့စား...နားလိုက် နော်....
1/27/2011 12:50 AM
ဤခန္ဓာပေါ် မနားမရပ် ခြားမပြတ်
တိုးပွားဥာဏ်စဉ် နိဗ္ဗာန်ခွင် ပြေးဝင် ဆိုက်ရောက်
ပေါ်ရိုး ဆင်းရဲ လွှမ်းမိုးပယ်ပါ
1/27/2011 1:24 AM
Hope you will feel much better when you wake up in the morning. I can totally understand how much it sucks to be alone and not well..
Please be strong and you will be alright very soon....
1/27/2011 2:24 AM
1/27/2011 2:59 AM
1/27/2011 3:51 AM
:D ကျွန်တော်လဲ ဖျားနေတယ်။ ကံကောင်းတာက ဘေးမှာ အမေရှိတယ်။ :P
ကလေးတုန်းက ရေးပေမယ့် ကလေးမဆန် ပါဘူး။ ရယ်စရာလဲ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ကဗျာလေးက လှကလှနဲ့ ကောင်းပါတယ်။ မျက်စိထဲကို ဖျားနေတဲ့ပုံ အကွက်လိုက် အကွင်းလိုက် မြင်ရတယ်။
ဖျားတဲ့ည ဆိုလို့ အောင်ရင့်သီချင်းကို သွားသတိရမိနေတယ်။ ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့အဝေးမှာ ဖျားနာရရင် ပိုအားငယ်ရတာ ကိုယ်ချင်းစာတယ် အမရေ။ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေ နော်။ ဥုံဖွး)
wishing you getting better soon both physically and mentally... :)
1/27/2011 6:33 AM
အိပ်ရာက နိုးလာတော့ ကွန်မန့်လေးတွေ မြင်ရတာ တ၀က်လောက် သက်သာသွားသလိုပါပဲ။
ဆုတောင်းပေးကြသူများ အားပေးကြသူများ အကြံဉာဏ်ပေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
ဒီရာသီက တုပ်ကွေးရာသီဆိုတော့ တော်တော်များများ ဖျားနေကြတယ်..၊ ခံရခက်တာတော့ အမှန်ပါပဲ..၊
ဒါပေမယ့် ဖျားတာဟာလည်း လူပီသခြင်း တရပ်ပါပဲ၊ အမြန်ဆုံး နေကောင်းပါစေဗျာ....။
1/27/2011 8:31 AM
အမြန်နေကောင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပါတယ် မမေ ရေ
1/27/2011 11:26 AM
နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးက
Mr.Bean ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကြည့်တာ ကောင်း
မယ်ထင်တယ်ဗျ၊ ကြည့်လို့ မနိုင်ရင်လည်း
ဟာသဇာတ်လမ်း အသံတွေကို နားထောင်သင့်
တယ်၊ အထီးကျန်ဆန်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊
လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ ရောက်နေတာ ဖြစ်မှာပါ၊
1/27/2011 11:41 AM
လွန်ခဲ့သော အနှစ်၂၀ က ကဗျာကို ပြန်မှတ်မိတာ တော်တော်တော်တာပဲ၊
တစ်ယောက်ထဲ သူစိမ်းတွေကြားဖျားတုန်းက သီချင်းတွေနားထောင်လိုက်အိပ်လိုက်နဲ့ အဖျားကြအောင် စောင့်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီမှာလည်း နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ခေါင်းကိုက်တာ ခေါင်းကို မထူနိုင်ဘူး
ခုမှ နည်းနည်းသက်သာလို့ စာလိုက်ဖတ်တော့ မမေ နေမကောင်းတာ သိရတယ်..
တစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့ခါ ဖျားရင် သိပ်အားငယ်တာဘဲ။
မိဘတွေစိတ်ပူမှာ စိုးလို့သာ ဘာမှ မပြောတာ။
သိရင်တော့ သူတို့လည်း ပြေးလာချင်ကြမှာပါဘဲလေ။
အားမငယ်နဲ့ ဘလော့ပေါ်က မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးပါ။
ကဗျာလေးကြိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ကရေးခဲ့သလို ခုလဲ ဖျားတဲ့ည ကို ကဗျာ အသစ်ထပ်ရေးပါ။
1/27/2011 12:09 PM
ကိုယ်ဖျားလို့ဆရာဝန်ဆီသွားရင်..
သူမေးတဲ့ အခါ..ဘာမှ ပြောပြမနေတော့ဘူး..
ကဗျာဖတ်ပြီးရင်တော့ ဆရာဝန်သဘောပေါက်ပေါ့...ဟုတ်း)
ကျနော်ငယ်တုန်းက နေမကောင်းဖြစ်ပြီး အိပ်ယာထဲမှာတစ်ယောက်ထဲနေရရင်
ဆရာမကြည်အေးရဲ့ ကဗျာလေးက အလိုလိုခေါင်းထဲရောက်လာတာ..။
အိပ်ယာတွေလဲ ကြေမွတွန့် လိပ်
1/27/2011 3:36 PM
နေမကောင်းရင် အားငယ်တတ်ကြတာ သဘာဝတခုလိုဖြစ်နေပေမယ့် အားငယ်နေရုံနဲ့ သက်သာမှာမှ မဟုတ်တာ။ ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ ထိရောက်တဲ့ ဆေးဝါး သောက်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး အနားယူပါ။
အားမငယ်နဲ့နော်။ မမြင်ရတဲ့ ခင်မင်သူတွေ ရှိတယ်လေ။
"အပြာရောင်ဖုန်းလေးထဲမှာ ... "ဖျားနေပြီ "... လို့ စာလုံးလေး ၃ လုံး ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုပြောဖို့လဲ ... ဘယ်သူ့ဆီ ပို့ရမှာလဲ ... ပို့ရင်ရော ... အကြောင်းထူးမှာလား ... မသိပါဘူး ... တကယ်ပဲ မသိပါဘူး။ ......."
အဝေးရောက်နေချိန် တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ကို တကယ်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် မမေ ရေ..။
အားတင်းပြီး အခုလို အင်တာနက်ဝင် စာလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးတင်လိုက်ပါ။ မမေကို ချစ်ခင်သူတွေ ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ အားပေးမှုရှိနေပါတယ်။
Take care.U r not alone,among ur blogger bros n sis (blog reader like me 2).Get well soon.
ဘလော့ရှင်လေး မမေ... မြန်မြန် နေကောင်းလာပါစေလို့ အဝေးက ဆုတောင်းနေပါတယ်...
ပုံမှန်အချိန်တွေမှာထက် ဖျားနေချိန်မှာ အရမ်းအထီးကျန်
ငယ်ကတည်းက ဖျားပြီဆို အထီးကျန်ခံစားမှုတွေ ဝင်လာ
1/28/2011 12:17 PM
ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက် ။ အသက်က ငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး။ :P
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ အဖျားပျောက်လောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ မပျောက်သေးရင်လဲ ပျောက်ပါစေ။
အဖျားပျောက်စေခြင်းအကျိုးငှါ လက်ဆောင်ကဗျာလေး ပေးလိုက်သည်။